Mabasa Evaapostora 9:1-43
Sauro achienda kuDhamasiko (1-9)
Ananiyasi anotumwa kunobatsira Sauro (10-19a)
Sauro anoparidza nezvaJesu muDhamasiko (19b-25)
Sauro anoshanya kuJerusarema (26-31)
Petro anoporesa Eniyasi (32-35)
Dhokasi anomutswa (36-43)
9 Asi Sauro, achiine shungu dzekutyisidzira nekuponda vadzidzi vaIshe,+ akaenda kumupristi mukuru, 2 ndokumukumbira tsamba dzekuenda nadzo kumasinagogi ekuDhamasiko, kuti auye kuJerusarema akasunga vese vaaiwana vari veNzira Iyi,+ varume nevakadzi. 3 Paakanga ari munzira ava kusvika pedyo neDhamasiko, akaerekana apenyerwa kumativi ese nechiedza chakabva kudenga,+ 4 akabva awira pasi, ndokunzwa inzwi richiti kwaari: “Sauro, Sauro, uri kunditambudzireiko?” 5 Akabvunza kuti: “Ndimi ani, Ishe?” Iye akati: “Ndini Jesu,+ wauri kutambudza.+ 6 Asi simuka upinde muguta, wonoudzwa zvaunofanira kuita.” 7 Varume vaaifamba navo vakangomira vasingatauri, vachinzwa inzwi, asi vasingaoni munhu wacho.+ 8 Sauro akabva asimuka, asi hapana chaaiona kunyange zvazvo maziso ake akanga akasvinura. Saka vakamubata ruoko, vakapinda naye muDhamasiko. 9 Akaita mazuva matatu asingaoni,+ uye hapana chaakadya kana kunwa. 10 MuDhamasiko maiva nemumwe mudzidzi ainzi Ananiyasi,+ uye Ishe akataura naye muchiratidzo achiti: “Ananiyasi!” Iye akati: “Ndiri pano, Ishe.” 11 Ishe akati kwaari: “Simuka uende kumugwagwa unonzi Wakarurama, kunotsvaga murume anonzi Sauro anobva kuTaso,+ ari pamba paJudhasi. Nekuti ari kutonyengetera izvozvi, 12 uye muchiratidzo chaapiwa aona murume anonzi Ananiyasi achipinda ndokuisa maoko ake paari kuti aonezve.”+ 13 Asi Ananiyasi akapindura kuti: “Ishe, ndakanzwa nevakawanda nezvemurume uyu, zvese zvakaipa zvaakaitira vatsvene venyu muJerusarema. 14 Uye akauya kuno apiwa simba nevatungamiriri vevapristi kuti asunge vanhu vese vanodana zita renyu.”+ 15 Asi Ishe akati kwaari: “Enda! nekuti kwandiri murume uyu mudziyo wakasarudzwa+ kuti aende nezita rangu kune mamwe marudzi+ nekumadzimambo nekuvanakomana vaIsraeri.+ 16 Nekuti ndichanyatsomuratidza matambudziko akawanda aachasangana nawo nekuda kwezita rangu.”+ 17 Saka Ananiyasi akaenda, akanopinda mumba macho, ndokuisa maoko ake paari, akati: “Sauro hama yangu, Ishe Jesu, uyo akazviratidza kwauri mumugwagwa pawakanga uchiuya, andituma kuti uonezve uye uzadzwe nemweya mutsvene.”+ 18 Pakarepo mumaziso ake makabva madonha zvinhu zvinenge makwati, uye akatanga kuonazve. Akabva asimuka akabhabhatidzwa, 19 ndokuzodya achibva awana simba. Akagara muDhamasiko nevadzidzi kwemamwe mazuva,+ 20 uye akabva atanga kuparidza nezvaJesu mumasinagogi, kuti uyu ndiye Mwanakomana waMwari. 21 Asi vese vaimunzwa vaishamiswa uye vaiti: “Uyu haasi iye here murume aiparadza vaya vemuJerusarema vanodana zita iri?+ Haana kuuya kuno achida kuvasunga oenda navo kuvatungamiriri vevapristi here?”+ 22 Asi Sauro akaramba achiwana simba uye aishamisa vaJudha vaigara muDhamasiko paaitsanangura zvinogutsa kuti Jesu ndiye Kristu.+ 23 Papera mazuva akati wandei, vaJudha vakarangana kumuuraya.+ 24 Asi Sauro akaziva kuti vakanga vachimurongera zvakaipa. Uye vaigara vakanyatsotarisa pamagedhi siku nesikati vachida kumuuraya. 25 Saka vadzidzi vake vakamutora, ndokumudzikisa usiku, vachimuburutsa ari mudengu neparusvingo pakanga pakavhurika.+ 26 Paakasvika muJerusarema,+ akaedza kubatana nevadzidzi, asi vese vaimutya, nekuti vakanga vasingabvumi kuti akanga ari mudzidzi. 27 Saka Bhanabhasi+ ndiye akazomubatsira, akaenda naye kuvaapostora, ndokuvaudza pamusoro pekuti akaona sei Ishe mumugwagwa,+ uye kuti akanga ataura naye. Akavaudzawo nezvekutaura kwaakaita neushingi muzita raJesu kuDhamasiko.+ 28 Saka akaramba ainavo, achifamba hake akasununguka* muJerusarema, achitaura neushingi muzita raShe. 29 Aitaura achiitisana nharo nevaJudha vaitaura chiGiriki, asi vakaedza kumuuraya.+ 30 Hama padzakazviziva, dzakadzika naye kuKesariya dzikamutumira kuTaso.+ 31 Ungano dzese muJudhiya yese nemuGarireya nemuSamariya+ dzakabva dzava nenguva yerugare, dzichivakwa; uye dzakaramba dzichiwedzera nekuti dzaifamba dzichitya Jehovha* uye dzichinyaradzwa nemweya mutsvene.+ 32 Petro paaifamba munharaunda yacho yese, akasvika kuvatsvene vaigara muRidha.+ 33 Akawana imomo mumwe murume ainzi Eniyasi, akanga ava nemakore 8 akangorara pakamubhedha kake, nekuti akanga akaoma mutezo. 34 Petro akati kwaari: “Eniyasi, Jesu Kristu anokuporesa.+ Simuka upete mubhedha wako.”+ Iye akabva asimuka pakarepo. 35 Vese vaigara muRidha nemuBani reSharoni pavakamuona, vakatendeukira kuna Ishe. 36 MuJopa maiva nemumwe mudzidzi ainzi Tabhita, zvinoreva kuti “Dhokasi.”* Aiita mabasa akawanda akanaka uye aibatsira varombo nezvipo zvaaigadzira. 37 Asi mumazuva iwayo akarwara, akafa. Saka vakamugeza, vakamuradzika muimba yepamusoro. 38 Sezvo Ridha yakanga iri pedyo neJopa, vadzidzi vakanzwa kuti Petro akanga ari ikoko, vakatuma varume vaviri kunomukumbira vachiti: “Ungasvikawo here kuno nekukurumidza?” 39 Petro akabva asimuka, ndokuenda navo. Paakasvika, vakapinda naye muimba yepamusoro; uye chirikadzi dzese dzakauya kwaari dzichichema uye dzakamuratidza zvipfeko zvakawanda nezvekufuka zvakanga zvakagadzirwa naDhokasi paakanga achiinavo. 40 Petro akabva abudisa vanhu vese panze,+ uye akapfugama, ndokunyengetera. Akabva atendeukira kuchitunha chacho, akati: “Tabhita, muka!” Iye akavhura maziso ake, uye paakaona Petro, akamuka ndokugara.+ 41 Akamubata ruoko rwake, ndokumusimudza, akashevedza vatsvene nechirikadzi, akamuisa pamberi pavo ari mupenyu.+ 42 Izvi zvakazivikanwa muJopa yese, uye vakawanda vakatenda muna Ishe.+ 43 Akaramba ari muJopa kwemazuva akati wandei aine mumwe musukuti wematehwe ainzi Simoni.+
^ ChiGir., “achipinda nekubuda.”
^ Zita rechiGiriki rekuti Dhokasi uye rechiAramaiki rekuti Tabhita, ese anoreva kuti “Mhara.”